Ọdịdị Na-enweghị Peeji Ọ Bụ Ọdịnihu nke Nhazi Weebụ?
Nke a bụ akwụkwọ ndị ọbịa nke Evans Walsh dere. Kporie!
E nwere oge mgbe websaịtị nwere ọtụtụ peeji nwere ọtụtụ ozi. A na-ekewa ozi a ugboro ugboro gaa na peeji ndị nwere ike ịnweta site na menu igodo. N'oge ndị ahụ, ụdị omume a chere na ọ bụ enyi na enyi. Nkọwa nke ozi mere ka e nwee usoro nhazi nke na-eduzi ndị mmadụ n'ihe ha chọrọ.
Mana n'oge na-adịghị anya, ngwaọrụ mkpanaka bidoro ịmalite ume ma n'oge na-adịghị anya ha weghaara desktọọpụ dị ka ngwaọrụ kachasị nchọgharị weebụ. Ihe dịbu mma ugbu a ghọrọzi nsogbu. Ihuenyo ahụ dị obere ma njikwa dị iche iche. Nke a na-akpọ maka otu-na peeji nke aghụghọ ma ọ bụ na-akpọ “pageless aghụghọ” nke weebụsaịtị. Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a malitere ịmalite imewe ihe na-enweghị peeji iji ghọọ enyi na enyi.
Kedu ihe kpatara imewe na-enweghị peeji ji dị ọkụ dịkwa ka ọ dị afọ 3 gara aga?
E nwere ole na ole salient atụmatụ nke pageless website aghụghọ na-eme ka ọ nká na dị ka Las Vegas Web Design Co., ọ dị ezigbo mkpa n'oge a na-achịkwa ngwaọrụ mkpanaaka.
Splendapp nke Egypt na-enweta ego izizi mkpụrụ mkpụrụ isii anaghị ekpughe ya
Mmalite Fintech NALA na-emechi ntinye ego mkpụrụ $10M
#YouTubeBlack Voices Fund: Ndị okike YouTube 26 ahọpụtara maka ndị otu na-esote
TLcom na-ebuli nso nke mbụ $150M Pan-African Tech Fund
Na-anabata - A na-emelite atụmatụ niile na-enweghị peeji n'ime usoro nzaghachi. Ihe mejuputara ha bu mmiri grid nwere mmekorita. Site na 32 "Ikanam ákwà ngebichi ruo 5" ihuenyo mkpanaka, weebụsaịtị ndị a nwere ike dabara obosara nke ngosi ahụ n'enweghị nsogbu. Achọpụtala atụmatụ ndị na-enweghị ihu igwe site na nchọta Google yana nke 21 Eprel 2015, Google gosipụtara nhọrọ pụrụ iche maka weebụsaịtị nwere nzaghachi, atụmatụ enweghị peeji.
Ọhụrụ ọhụụ maka ịpịgharị -Enweghị ihe ntụgharị na-adị adị na-anabata ya, na -echekwa ibe weebụ edoghị anya. Nke a bụ ọkacha mmasị n'etiti ndị ọrụ mgbasa ozi ọhaneze ebe ọ nabatara echiche nke ịpịgharị na-agbagharị n'otu otu peeji. Ndị a bụ uru 4 ga - eme ka ị kwenye ịpịgharị akwụkwọ maka ịntanetị:
Na-ekwenyeghi: nke a bụ mgbe onye ọrụ enweghị ike ịme mkpebi mgbe ọ na-agagharị na ibe. Ingpị bụ ihe chọrọ nchọnchọ siri ike n'aka onye ọrụ yana ndị na-ege ntị nwere ntụsara ahụ karịa na-agagharị na ibe kama ịpị ọdịnaya.
Speed: ịpịgharị bụ ụbọchị ọ bụla karịa ịpị. Nke a na-enye ndị ọrụ ohere ịchọgharị site na ọtụtụ ọdịnaya na ibe peeji na-enweghị nkwụsị ọ bụla ma ọ bụ oge nchekwa.
Mmetụta na-emetụ aka: nhọrọ ntụgharị kachasị nghọta bụ ndị nwere mmekọrịta na-emetụ aka ma dị mma maka weebụsaịtị wepụtara maka ekwentị mkpanaaka naanị.
Eke na ire ụtọ: na biakwa obibia nke na-elekọta mmadụ media na ịzụ ahịa ngwa, ịpịgharị bụ eke nzaghachi ọrụ nwere. Scroll bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ọ bụ mmeghachi omume sitere n'okike nke onye ọrụ ọ bụla nwere na weebụsaịtị (mkpanaka ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ).
Nhazi na ndị isi –Pageless aghụghọ nwere ozi niile gbasara weebụsaịtị, ngwaahịa na ọrụ ya hazie n'otu peeji. Ugbu a, nke a chọrọ mgbalị siri ike nhazi site na nkwado. Ebumnuche bụ inye ozi niile ndị na-ege gị ntị chọrọ n'otu peeji. Mana ekwesiri ịhazi ozi ahụ nke ọma ka ndị ọrụ gị nwee ike ịchọta ihe ha na-achọ. Ozi dị mkpa ekwesịghị ịla n'iyi na ọdịnaya. Ọ dị mma iji usoro ihe omume / ozi ga-eduzi. Bụrụ na nke pageless aghụghọ ị kwesịrị ị na-eji ihe ndị kasị mkpa ọmụma mbụ. Ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ịhazi data n'otu ụzọ ahụ mgbe ị na-eji ọtụtụ webụsaịtị wepụta. Ọtụtụ mmadụ ka na-enwe obi abụọ banyere mmalite nke imepụta peeji na-enweghị peeji. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-eche na ọ bụ fad, ndị ọzọ na-eche na imewe enweghị peeji abụghị ezigbo echiche maka ha. Ndị a bụ ajụjụ abụọ kachasị mkpa ọtụtụ ụlọ ọrụ nhazi na-anwale n'oge a -
Nzube na-enweghị peeji adịghị mma maka weebụsaịtị buru ibu?Maka nnukwu weebụsaịtị dị ka amazon na eBay ọ nwere ike iyi ka ọ bụ echiche ọjọọ ịga maka imewe enweghị peeji. Mana n'ikpeazụ, site na nhọrọ doro anya nke Google maka ngwa ngwa ngwa ngwa na saịtị na-enweghị peeji, onye ọ bụla ga-enwerịrị atụmatụ na-enweghị ihu na ihu n'oge na-adịghị anya. A ga-enweta atụmatụ na-enweghị atụ maka nnukwu ngwa ahịa na azụmaahịa site na enyemaka nke ọtụtụ akụkụ enweghị peeji na ngalaba. Ndị a jikọtara ọnụ iji mepụta katalọgụ nke weebụsaịtị ma jikọtara ya na weebụsaịtị. Nke a bụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya maka ndị nrụpụta ọkwa mbido.
Iji otu peeji nke imepụta ihe na-emetụta SEO n'ụzọ dị njọ?Ojiji nke ọdịnaya di elu na otu peeji na-akwalite SEO gị ma nyere gị aka na akara Google PageRank. Site na ozi niile dị na ibe, ị ga - eme ka ọdịnaya gị daa karịa. Nke a ga - ewetara gị CTR dị elu ma belata ọnụego bounce gị, karịa oge. Nhazi a na-enweghị atụ bụ ugbu a na ọdịnihu nke imepụta weebụsaịtị. Ọ ga-abụ ihe nzuzu imechi ọnụ ụzọ anyị maka usoro na-aga n'ihu ma na-agbanwe agbanwe dị ka nke a, ma na-agọnahụ usoro ndị ga-eme n'ọdịnihu. O nwere ike ịbụ nnyo siri ike nye ọtụtụ ndị nrụpụta, mana ọ bụghị nke a na-ewepụtakwa.
Onye edemede: Evans Walsh bụ onye ode akwụkwọ nwere onwe ya. Odeela otutu ederede di nma banyere ihe omuma di iche iche dika teknuzu, ahuike, ejiji, ima nma, mmuta, oru, ime njem wdg. Ọ hụrụ n'anya ịkọrọ ndị enyi ya na ndị ọrụ ibe ya ihe ọmụma ya na ahụmịhe ya.
Mmalite Rwandan? Tinye akwụkwọ maka Mmemme Innovation Fintech
TD Africa na-ekwe nkwa inye ihe karịrị nde ụmụ nwanyị Naijiria 10 ikike site na 2025
SA Startup CompariSure na-echekwa ego $980k tupu usoro A
TallOrder na-enweta ego mgbakwunye $3M Series A
Mmalite Fintech nke Ghana OZÉ na-echekwa $3M Pre-usoro A Gburugburu
Mmalite ịkwụ ụgwọ nke SA na-achọ Floatpays na-enweta $4M